पर्यटन बर्ष २०२० - चट्टानी चूनौती र सम्भावनाको ढोका - Baikalpikkhabar
पर्यटन बर्ष २०२० – चट्टानी चूनौती र सम्भावनाको ढोका
नेपाल सरकारले घोषणा गरेको ‘नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२०’ को सम्मुखमा आइपुगेका छौं । नेपाल सरकारले २०७४ सालको साउन महिनामा ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ घोषणा गर्दै २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने वाचा गरेको थियो । यसपछि आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पनि भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको थियो ।
सरकारले यसअघि पनि विभिन्न तरिकाले नेपालमा भ्रमण गर्ने योजनाहरु सार्वजनिक गरेको थियो । २०७३ साललाई सरकारले आन्तरिक पर्यटन वर्षको रुपमा घोषणा गरेको थियो । तर, आवश्यक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भ्रमण वर्षले खासै सफलता प्राप्त गर्न सकेन ।
त्यतिबेला प्रत्यक्ष सम्बन्धित मन्त्रालय पर्यटन, नागरिक उड्डयन र संस्कृति र अर्थमन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसकेको यर्थाथ हाम्रा बीचमा ताजै छ । पर्यटन मन्त्रालयले बनाएको निर्दे्शिकालाई स्वयं मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्न नसक्दा सरकारले नै घोषणा गरेको पर्यटन वर्षमा अघोषित आन्तरिक विवादजस्तै सृजना भयो । खासमा तत्कालीन अवस्थामा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई घुमफिर गर्नका लागि सातदिने भुक्तानीयुक्त बिदा (पेड–लिभ) दिइ कर्मचारीहरूमा पुनर्ताजगीसहित आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत योगदान पुग्ने लक्ष्य राखिएको थियो । उक्त प्रस्तावको कार्यान्वयनमा सरकारका सबै निकायबीच नै तालमेल हुन नसक्नु दुखद विषय थियो ।
यही यर्थाथकाबीच आगामी वर्ष सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने महत्वाकांक्षी घोषणा गरिएको हो । तर, संघीय नेपालको अभ्यास गरिरहेको नेपालका तीनै तहले पर्यटन वर्षलाई सफल बनाउन कसरी समन्वय गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको तयारी नै छैन भन्दा फरक नपर्ला ।
आम चूनौतीकाबीच पनि सरकार, पर्यटन व्यवसायी तथा आम पर्यटनकर्मीहरुले पर्यटन वर्षलाई सफल बनाउने ‘कसम’ खाइ नै रहेका छन् । उनिहरुको उक्त प्रतिबद्धताहरुलाई केही नेपालीहरु पनि सहयोगी बचन दिइरहेका छन् । तर, समग्र पर्यटन क्षेत्रको समन्वयकारी एक मात्रै संस्था नेपाल पर्यटन बोर्ड यतिबेला नेतृत्वबिहिन छ ।
खासगरी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीको चारवर्षे कार्यकालअवधि सकिएकाले नेतृत्वबिहिन अवस्था देखा परेको हो । तर, जोशीको कार्यकाल कहिले सकिने भन्ने विषय जोशीको नियुक्तिसँगै पक्का भएको विषय हो । अहिलेसम्मको अधिकतम संख्याभन्दा दोब्बर पर्यटक भित्र्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अगाडि हुँदाहुँदै यो विषयमा सरकारको ध्यान पहिल्यै जानुपथ्र्यो कि ?
अर्को विषय पर्यटन वर्षलाई मात्रै ध्यान दिने र यसको व्यवस्थापनका लागि भन्दै सरकारले बनाएको भिजिट नेपाल २०२० को सचिवालयका समन्वयकर्ता सुरज बैद्यलाई पर्यटनकर्मीले रुचाएका छैनन् । व्यक्तिगत टिप्पणी भन्दा पनि समग्र नेपालको इज्जत, प्रतिष्ठा र सम्बृद्धिसँग जोडिएको विषयको नेतृत्वकर्ता सबैले रुचाएको हुनुपर्ने धेरै पर्यटनकर्मीको भनाई छ ।
सर्बदलीय सहमतिको अभाव
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को घोषणा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका हुन् । तर, उनको घोषणालाई उच्च महत्वाकांक्षी भन्दै कतिपय राजनीतिक दलहरुले विरोधि टिप्पणी गरिरहेका छन् । खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० लाई सहर्ष स्वीकार गर्न सकेको छैन । यसका लागि सत्ताधारी दल नेकपा सचिवालयले राजनीतिक तहमै नेपाल भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउने गरी पहल गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहसँग समन्वय खै?
तीन तहको सरकारका अधिकांश काम कामकारबाहीमा अझै स्पष्टता छैन । संविधानले स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिएका कतिपय अधिकारहरुमाथि पनि संघीय सरकार हाबी भइरहेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा पनि तीन तहका सरकारले कसरी समन्वय गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट छैन । खासगरी पर्यटकहरुलाई लाग्ने शुल्क तथा अन्य जिम्मेवारीका विषयमा को जिम्मेवार हुन्ने भन्ने विषयको अन्योलता चिर्न सरकारले अझै काम गर्न सकेको छैन ।
आधारभूत शर्तमा पनि ‘कम्प्रमाइज’
पर्यटकहरु घुम्न जानुको पहिलो कारण नै रमाइलो गर्न तथा एक अर्को समाज तथा देशको बारेमा नयाँ अनुभव लिनु हो भने अर्को कारण अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नु हो । नेपाल आउने पर्यटकहरु पनि यिनै कारणहरु सहित आउने गर्छन् । यसरी घुम्न आउने पर्यकहरुका लागि आधारभूत स्तरका आवश्यकता पूरा गर्नु नेपालको पनि आधारभूत दायित्व हुन आउँछ ।
तर, आम मानिसका लागि आधारभूत ‘शर्त’ का रुपमा रहेका शुद्ध खानेपानी, सफा चर्पी तथा स्वस्थ्य खानेकुरामा नै पर्यटकहरुले कम्प्रमाइज गर्नुपर्ने बाध्यता नेपालसँग छ । यसमा पनि चर्पी र वातावरणीय सरसफाईका् समस्या झनै टड्कारो समस्याका रुपमा देखा परेको छ । नेपाल नै खुल्ला दिसा मुक्त घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा पनि पर्यटकीय क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालयको प्रयाप्त व्यवस्थापन छैन । जसका कारण पर्यटकहरुले गम्भीर सास्ती व्यवहोर्नुपरेको पर्यटनकर्मीहरु बताउँछन् ।
सरकारी घोषणा अनुसार आगामी वर्ष सन् २०२० मा हामीले २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउनैपर्नेछ । यो सन् २०१७ को तथ्यांकभन्दा दोब्बरले बढी हो । नेपालले भ्रमण वर्षको रुपमा मनाएको सन् २०१७ मा हालसम्मकै उच्च पर्यटक संख्या ९ लाख ४० हजार पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । यो लक्ष्य नेपालले सन् २०११ को नेपाल पर्यटन वर्षमा राखेको थियो । यसमा पनि ‘क्वालिटी टुरिष्ट’को संख्या कम नै रहेको देखिन्छ ।
नेपालमा भएको लामो गृहयुद्ध माओवादी जनयुद्ध सुरु भएको सन् १९९६ मा जम्मा ३ लाख ९३ हजार पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको तथ्यांक छ । त्यसपछि ‘भिजिट नेपाल इयर १९९८’ मा वर्ष ४ लाख ६३ हजार पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको पर्यटन मन्त्रालयको तथ्यांक छ भने सन् १९९९ करिब ५ लाखले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यसपछि सन् २००१ मा पनि करिब ३ लाख ६१ हजार पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेकोमा सन् २००२ मा पर्यटकको संख्यामा गिरावट आउँदै २ लाख ७५ हजारमा झरेको थियो । त्यसपछिको नेपाली राज्य व्यवस्थामा भएको परिवर्तनसँगै सन् २००७ मा ५ लाख २६ हजार पुगेको देखिन्छ भने सन् २०१५ मा नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीलगायतका कारणले पर्यटकको स‌‌‍ख्यामा कमी आएको देखिन्छ ।
यद्यपि नेपाली पर्यटन क्षेत्रमा विस्तारै पर्यटकको संख्यामा भने बृद्धि भइरहेको छ । प्रविधिको विकास र विश्व समाजमै घुमफिरप्रतिको बढ्दो रुचीमा कारण विस्तारै नेपाली पर्यटन बजारले पनि उचाइ लिइरहेको छ । योसँगै सरकारले पनि पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक सम्बृद्धिको मेरुदण्ड भनेर प्रचारात्मक शैलीमा अगाडि ल्याइरहेको छ ।
तर, पर्यटकलाई लागि आवश्यक आधारभूत आवश्यकता, पर्यटकीय पूर्वाधारमा भने स्वभाविक परिवर्तन बाहेक व्यापक सुधार हुन नसक्नु सुखद पक्ष होइन । यसर्थ, आधारभूत पूर्वाधारमा पनि कम्प्रमाइज गर्नुपर्ने सन्दर्भमा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन चुनौतीका चट्टानहरु हाम्रासामू खडा छन् । तर, चूनौतीसँगै सम्बृद्ध नेपाल अभियानको ढोकाको ‘चाबी’ पाउने सपना पनि सरकारको छ ।
तसर्थ, यतिबेला ठूला कुराको पछि लाग्नु भन्दा पनि माथि भनिएको आधारभूत विषय चर्पी, शुद्ध खानेपानी तथा शुद्ध खानेकुराका विषयमा आम व्यवसायी, रेष्टुरेन्ट सञ्चालकहरुले पनि सहयोग गर्ने वातावरण सरकारले सृजना गर्नुपर्छ । योसँगै स्थानीय तहहरुलाई समन्वका लागि एकमुष्ठ सन्देश दिने वातावरण पनि संघीय सरकारले बनाउनुपर्छ । यो चट्टानी चूनौती र सम्भावनाकाबीच नेपालले पर्यटन वर्ष २०२० मा साँच्चै २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउनुछ । यसका लागि आम नेपालीको साझा प्रतिबद्धता चाहिएको छ ।
बुधबार, १६ पुष, २०७६, दिउँसोको ०१:२५ बजे